Naya Bikalpa | पाँच वर्षसम्मै आन्तरिक कलह नहोला भनेर अहिले अनुमान गर्न सकिन्न - Naya Bikalpa पाँच वर्षसम्मै आन्तरिक कलह नहोला भनेर अहिले अनुमान गर्न सकिन्न - Naya Bikalpa
पाँच वर्षसम्मै आन्तरिक कलह नहोला भनेर अहिले अनुमान गर्न सकिन्न
प्रकाशित मिती: २०७४ फाल्गुन ७, ०६: २३: ४५
नयाँ संविधान अनुसार तीन चरणको निर्वाचन पश्चात नयाँ सरकार निर्माण भइसकेको छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह, प्रदेशसभा प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा सबै तहको निर्वाचनमा नराम्ररी पछारिएको छ । बामपन्थी गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा पदासिन भएका छन् । भाषण र उखान टुक्का हाल्नमा माहिर के.पी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पश्चात अब मुलुकले राजनैतिक फड्को मार्ने टिप्पणीहरु आउन थालेका छन् ।
विगतको सरकारको पालामा आर्थिक नीतिमा व्यापक परिवर्तन आउने अपेक्षा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुले गरेका थिए । तर अब नयाँ सरकारको गठनसँगै यो अपेक्षा अझै बढेको छ । यसै सदर्भमा नयाँ सरकार गठन भए पश्चात आर्थिक क्षेत्रका एक विशिष्ट व्यक्तित्व तथा नेपालको प्रशासन क्षेत्र लामो समय सम्हालीसकेका अर्थसविज्ञ तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग समसामयिक विषयमा पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी सम्पादीत अंशः
तपाई अर्थविज्ञको नजरमा नयाँ सरकारको आर्थिक चुनौति के–के होलान् ?
म आर्थिक कुरा मात्रै गर्छु । राजनीतिक चुनौतिहरु पनि थुप्रै होलान् । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति वाह्य क्षेत्र ज्यादै कमजोर भएर गएको छ । हाम्रो व्यापारको शर्त नेपालको विपक्षमा भएका छन् । वैदेशिक मुद्राको स्रोत नभईकन हामीले समृद्धिको सपना पूरा गर्न सक्दैनौं । त्यस सन्दर्भमा सरकारले यो वाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउनको निमित्त वित्त नीति पनि सन्तुलित गर्नुपर्दछ । गएको सरकारले के गर्यो भने वाह्य क्षेत्र कमजोर हुँदाहुँदै पनि नेपालमा उत्पादनशील काममा खर्च बढाउने प्रयत्न गरेन ।
बरु भएको वित्तिय स्रोत पनि विना काममा वितरण गर्ने काम ग¥यो । निर्वाचनपछि कतिपय निर्णय यस्ता भए जसले अर्काै सरकारलाई सकेसम्म पैसा उपलब्धी नै नहोस् अर्काे सरकारले कार्म गर्न नसकोस् भन्ने आशय राखेर काम गरेको हो कि भन्ने पनि देखियो । थुप्रै पैसा नेपाल सरकारले खर्च गर्नुपर्ने रकम चाहिंँ कमिट्मेन्ट गरिसकिएको छ । प्रतिबद्धता जनाइसक्या छ । अर्काे सरकारलाई अवसर चाहिँ अलिकति कम छ । त्यस्तो गर्न चाहिँ हुँदैनथ्यो । त्यो सन्दर्भमा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित बनाइराख्नको निमित्त पूँजी निर्माणको लगानी बढाउनको निमित्त र वाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलित राख्नको निमित्त आगामी सरकारलाई अलिकति चुनौति छ ।
त्यसोभए नयाँ सरकारले सु–शासन तथा वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सक्दैन त ?
सु–शासनको चुनौति मुख्य हो भन्ने कुरा त नव निर्वाचित प्रधानमन्त्री स्वयमले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले भ्रष्ट्राचारप्रति शून्य सहनशीलता अबलम्बन गर्दर्छौ ।” भ्रष्ट्राचार व्यापक छ भन्ने कुरा प्रष्टनै भयो अब अहिले गएको दुइ तीन वर्षको अवधिमा नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरु एकदम धरासयी भएका छन् । कुनैपनि निकायको कुरा गर्नुस निकायहरुले गर्नुपर्ने कामहरु गर्न सकिराखेका छैनन् । पुननिर्माण जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण काम पनि समयमा सम्पन्न भैरहेको छैन । सार्वजनिक संस्थाहरु धरासयी हुनु भनेको त्यहाँ कहि न कहि भ्रष्टाचार अथवा हेलचेक््रयाई अथवा असक्षमता छ ।
त्यो कुरा समस्या भै–हाल्यो तर यति भन्दाभन्दै पनि म के भन्छु भने नयाँ सरकारसँग यो चुनौतिलाई झेल्न सक्ने र समाधानका बाटोहरु पैल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने संम्भावना पनि उत्तिकै छ । अहिले सरकार भनेको वास्तवमा बहुमतको सरकार हो । यो दुइवटा दलहरु गाभिएर एउटा बन्न बाँकी छ त्यो भएता पनि उहाँहरुले कतिपय ठाउँमा मिलेर काम सुरु गरिसक्नु भयो । जस्तैः ३ नं. प्रदेशमा काम सुरु भैसक्यो । १ नं. प्रदेशमा काम सुरु भैसक्यो र एउटा प्रदेश बाहेक अरु सबै प्रदेशमा संघीय सरकारमा जसले बहुमत प्राप्त गरेको छ, त्यही सरकारकै पार्टीको नेतृत्व छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहमा पनि अधिकांश नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भनौ वा जे नाम राख्नु हुन्छ, उहाँहरुले त्यसैको नै नेतृत्व छ । स्थानीय तहमा सरकार परिवर्तन हुँदैन ।
प्रादेशिक तहमा पनि सरकार अब चाँही पाँच वर्षको अवधिमा परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना देखिएन र संघीय तहमा उहाँहरुले आफुले पालैपालो गरेर नेतृत्व गर्छु भनेता पनि एउटै दलको अथवा एउटै नीति र विचार भएका व्यक्तिहरुको पार्टी सरकारमा लिन सक्नुहुन्छ । अब स्थिरताको लाभ चाँही उहाँहरु आफुले लिन पनि नसक्ने भोली गएर बाहिरका प्रतिपक्ष अथवा बाह्य शक्तिले हामीलाई काम गर्न दिएन, हामीलाई हात बाँधेर राखियो भन्ने जस्ता कुराहरु गर्न चाँही हुँदैन । प्रत्येक सरकारलाई समस्या त अवश्य नै हुन्छन् । तिनीहरुलाई पुरा गर्दै लानु पर्दछ ।
आर्थिक क्षेत्रमा निकै समस्या बढ्ने सम्भावना छ भनेर भन्नुभयो, बजेटको आकार पनि ठूलो बनाउनुपर्ने चुनौती पनि छ, त्यसले गर्दा राजस्वको लक्ष्य पुगेन भने के हुन्छ त ?
अब त्यो सरकारले ध्यान पु¥याउने कुरा हो । गएको ५÷६ महिनामा हेर्नुभयो भने नेपालको सरकारको राजस्वको स्रोतहरु बलियो बनाउने र वित्तिय संस्थाहरुको स्थिति मजबुत बनाउने विभागमा काम पटक्कै भएको छैन् ।
कतिपय राजस्व असुली सम्बन्धी मुद्दाहरु पनि सरकारले हारेको कारण असुली हुन सक्ने सम्भावनाको बारेमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समन्वयनमा पुनरावलोकन गरेर जानुपर्दछ । त्यसो गरीएन भने सबै कालोधन सेतो हुन जान्छ । समन्वयनपछि मात्र असुल गर्नुपर्ने कार्यहरु अगाडी बढ्ने सम्भावना देख्दछु । अहिले कतिपय असुल उपर गर्नुपर्ने रकम पनि असुल गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
तर नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले त कालोधनलाई छुट दिन सकिने छ भनेर भन्नुभयो नि त ?
उहाँले जुन बाक्य भन्नुभयो, त्यो वाक्य उहाँले अवलम्बन गर्नुपर्यो । कालोधन भनेको सरकारले सेतो गराउने हो । कालोधन सरकारले जफत गरेर आम नागरिकको सार्वजनिक हितको निमित प्रयोग गर्ने हो ।
कालोधनलाई प्रोत्साहन दिने होइन । कालोधनलाई प्रोत्साहन दिने हो भने त समाजवादी व्यवस्था हुनै सक्दैन किनभने केही व्यक्तिहरु धनी भएको भै हुन्छन् र अरु व्यक्तिहरु चाँही पिडित भएको भई हुन्छन् । हामीले समाजमा समानता कायम गर्ने, आय समानता, सम्पतिको समानता र अवसरको समानता कायम गर्ने हो भने कालोधनलाई सरकारले सहनै हुँदैन । त्यसलाई थाहा पाउने बित्तिकै जहाँबाट भएपनि नेपालभित्र होस् या बाहिर होस्, अहिले नेपाल सरकारले बाहिरी शक्तिहरु पनि प्रयोग गरेर, बाहिरी संस्थाहरु पनि प्रयोग गरेर नेपालको पैसा कहीँ लुकाइएको छ भने ल्याउन सक्छ ।
हामीसँग त्यस्ता सम्झौताहरु पनि छन् । हामीले त्यस्तो कानुन पनि बनाएका छौं र अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्ध पनि सकेसम्म कालोधनको प्रयोग चाँही अस्थिरता निम्त्याउनको निमित्त, भ्रष्टाचार निम्त्याउनको निमित्त, आंतककारी गतिविधि भित्र्याउनको निमित्त प्रयोग नहोस् भनेर अरु देशहरुले पनि हामीलाई सहयोग गर्छन् । त्यो सहयोग चाँही लिन सक्नुपर्यो । त्यो जसको कालोधनको मालिक हो, उसैलाई प्रयोग गर्न दिएर देश सम्पन्न हुन्छ भन्ने त्यस्तो दिवा सपना पालेर बस्नु चाँही हुँदैन, त्यो चाँही उहाँले ठिक भन्नुभएको छ, त्यसको साथसाथै जति कुराहरु गर्नुहुन्छ, त्यो गरेका कुराहरु उहाँले पुरा गर्न सक्नुभो, उहाँको सरकारले पुरा गर्न सक्यो भने राम्रो होला । उहाँको नेतृत्वमा अहिले पनि सानो मन्त्रीमण्डल बनेको छ, समावेशी छ । एक तिहाइ महिला नै प्रतिनिधित्व गराउनु भएको छ ।
यो स्थिरता जुन देखियो सुरुमा र केही कुराहरु उहाँले सुरुमा गर्नुभयो कि प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिकामा विकास केन्द्रहरु स्थापना गरिने छ र औद्यौगिक विकासको आधारशिला खडा गर्ने प्रयत्न गरिने छ । अहिलेको नेपालको आवश्यकता भनेको त्यो हो । खाडीमा काम गरेका युवाहरुलाई फर्काउछु भनेर भाषण गरेर मात्रै हुँदैन । फर्किन उनीहरु तयार भएकै छन्, फर्किरहेकै छन् । अब ती फर्किरहेका युवाहरुलाई यहाँ काम गर्ने वातावरण दिनुप¥यो ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले पद्भार लगत्तै पाँच वटा विकास र सम्बृद्धिका कुराहरुको घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न सकएला ?
हो एकदम, उहाँले जे भन्नुभयो त्यसमा कुनै खोट लगाउनुपर्ने या यो भन्दा अर्को कुनै भन्दिएको भए हुन्थ्यो भन्नेपर्ने छैन । यी ज्यादै महत्वकांक्षी कुराहरु पनि छैनन् । हामीले गर्न सक्दै नसक्ने कुराहरु पनि छैनन् ।
तुरुन्तै पाँच÷छ महिना भित्रमा हाँसिल गर्न सक्ने कुराहरु छन् । ती कुराहरु अबलम्बन मात्रै गर्दिनुभयो भने पनि अहिले नेपाललाई चाहिएको, अथतन्त्रलाई चाहीएको आम नागरिकलाई चाहिएको भनेको आशाको प्रारम्भ हो । आशाको दियो मात्रै भयो भने पनि आम नागरिक काम गर्नको निमित्त तयार छन् । नेपालीहरु मिहिनेती पनि छन् । इमान्दारी पनि छन् । खाली वातावरण र अवसर नभएको कारणले युवाहरु विदेश पलायन हुनु परेको हो । अवसर र वातावरण बनाईदिने हो भने नेपाली युवाहरु देशमै बसेर काम गर्न थाल्छन् ।
नयाँ सरकारले देशलाई विकास र सम्बृद्धिको बाटोबाट अगाडी बढाउने आशा गरे भयो त ?
विगतमा पनि हामीले पटकपटक यस्तो कुराहरु त ग¥यौ । अब अहिले ढुक्कै भयो भन्ने अवस्था छैन् । कुन दिनमा गएर के दुर्घटना हुन्छ, यहाँ भन्न सकिँदैन, किनभने नेपालका बामपन्थी दलहरुमा एकाकार भएर मिलेर बस्न सक्ने सामथ्र्य विगतमा प्रमाणित भएको छैन । अब अहिले मिलिरहनु होला । पाँच वर्ष सम्मै आन्तरिक कलह नहोला भनेर अहिले अनुमान गर्न सकिन्न ।
कलह व्यवस्थापन गर्न सक्ने कौशल चाँही नेपाली नेतृत्वमा देखिएन । हरेक दलमा त्यो विभाजन भैरहने, सानोतिनो कुरामा विवाद भएर विभाजन भैरहने । अहिलेको मितिमा हेर्दाखेरी चाँही जुन विगत ३÷४ महिनाको अवधीमा यो दुइवटा ठूला दल मिल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन, त्यसमा भैइरहेको काम चाँही सन्तोषजनक देखिन्छ । बाहिर जेजति कुरा आएका छन, त्यस बाहेकका भित्र कुरा बुझ्दाखेरी पनि सकेसम्म विवाद सुल्झाउने, मिलेर जाने भन्ने प्रवृति देखिएको छ । उहाँको आफ्नो जुन व्यक्तिगत स्वभाव छ, त्यो स्वभावलाई राष्ट्रिय लाभको निमित्त, राष्ट्रिय भलाइको निमित्त प्रयोग गर्नुभयो भने सुन्दर भविष्य छ भन्न सकिन्छ ।
२०७४ फाल्गुन ७, ०६: २३: ४५
नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- नेपाल बहुल राज्य भएकाे र त्याे एजेण्डा लागु गर्न सत्ताबाट समेत संघर्ष गर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका जनता...
नयाँ विकल्प, काठमाडाैं-नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरिनु...